Kuita kwedzidzo mushure mekurwiswa muzera revana - Kubata Kudzidziswa
Iwe uripano: musha » Articles » kudzidza » Kuita kwedzidzo mushure mekurwiswa muzera revana
Kurova chimwe chinhu chatinowanzobatanidza neane zera uye zera rekusanzwisisika, kazhinji pamwe nezvinotemesa njodzi sekuputa kana kudya kwakaringana. Migumisiro yenguva refu uye zvinorehwa nevarwere vari kuona chiitiko checypbrovascular vanozivikanwa zvakanyanya. Muchokwadi, isu tinotarisira kudzora kwekuziva  kana kusarudzika zvakasara zvinoda manejero akakwana .
Nekudaro, pane chisina kujairika mamiriro ezvinhu akakodzera kutarisirwa. wechipfuva ischemic sitiroko. Kunyangwe zvisingawanzoitika, chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekukuvara kwehuropi pazera diki, uye zvinosanganisira nhevedzano yekukanganisa kwakawanda kwakadzora mhedzisiro zvakare mukuita kwechikoro nenzira ichiri kunyatsonzwisisika.
Chero zvazvingaitika, zvidzidzo zvakawanda zvakaratidza kuti kurohwa kwevacheche kunogona kuve nehupfu hunosvika makumi mana muzana uye zvichitungamira nekuremara kwenguva refu kwemutsipa mune 40% yevanhu vanopona. Uku kushomeka kunogona kusanganisira kufunga kwekutaura uye chisiri chomuromo, kumhanyisa mhanyisa, kuverenga uye kugona kwemasvomhu, pamwe nehunyanzvi hwemagariro. Zvinotorwa pamwechete, izvi zvinokanganisa zvinoita kuti vana vanyanye kuve panjodzi dzezvikoro zvakaoma uye zvakanyanya kuti vanozoonekwa vaine hurema hwekudzidza. 
Zviripachena, kuoma kwekushomeka uku kunoenderana nezvinhu zvakawanda, kusanganisira nzvimbo uye hupamhi hwemaronda, pamwe nezera rinoitika pakurohwa. Iko peculiarities kweuropi muzera rekukura, kusanganisira chinyorwa plasticity uye yake ngozi, inoda kutorwa mukufungwa.
Ongororo ichangobva kuitwa naChampigny nevamwe  vakaongorora mashandiro evadzidzi vevana makumi matatu neviri avo vairwara nesitiroko uye vakavafananidza neboka revana makumi matatu nematanhatu vanokura vana vezera rimwe chete. Ivo vatori vechikamu mukutsvaga, vane makore masere kusvika gumi nemasere, vakaongororwa neuropsychological; pamusoro peizvozvo, mamakisi avo epamakosi akafungidzirwa uye kune kwavo kwakaoma muzvikoro uye mumagariro kwakaongororwa, zvakaringana pane izvo zvakataurwa nevabereki.
Iwe unogona zvakare kufarira: Nhau dzakanaka: kuverenga kwakabatanidzwa kunoshanda (kunyanya izwi remadimikira)
Mhedzisiro dzakaratidza kushushikana kwevabereki nezvekushomeka kunogona kuitika pakuverenga, kutaura kwemuromo, kugadzirisa dambudziko remasvomhu, kunyora kweruoko uye kugona kuyeuka ruzivo.
Izvo zvakakoshawo kuziva kuti vazhinji vevarwere vakagamuchira imwe fomu ye rubatsiro rwekudzidza, sekuronga kwakarongeka kudzidzisa, kutsigira, rubatsiro rwakawedzerwa kana kuwana mukana wekubatsira tekinoroji (kuburikidza nemakomputa nematafura). Uyezve, vana vari muboka rekurwara-shure vanga vachiwanikwa vaine hurema hwekudzidza (41%).
Kuenzaniswa neyeanopsychological kuongorora, vana vane nhoroondo yekurohwa vakaratidza a kuderera mukugadzirisa ruzivo uye imwe kushoma kwekutaura kwekutaura, kunyangwe pasina kukanganisa kukuru mukufunga asiri nemuromo.
Pamusoro pekudzidza kwechikoro (kuverenga, kunzwisisa kwemitsara, kunyora uye masvomhu), vaongorori vakasimbisa kuti zvidzidzo zvine sitiroko zvakawaniswa zvikore zvakaderera kwazvo kupfuura shamwari dzavo. Kuwedzera kuongororwa kwakaratidza kuti uku kushomeka iwo akange asina hukama nenzvimbo yehemispherical yemaronda (kurudyi kana kuruboshwe).
Zvinoshamisa kuti, kunyangwe kana zvichinetsa pakudzidza kuchikoro, vana vanokurumidza kurohwa vakagamuchira mamakisi akafanana neawo evezera ravo, kunyangwe izvi zvinogona zvakare kutsamira pane avo akasarudzika vanhu.
Mukupedzisa, izvi mhedzisiro zvinotiisa pamberi pe zvinokanganisirwa nekurohwa kwevacheche muchimiro chechikoro, kunyange izvi zvisingaonekwe nekukasira kubva kumavhoti akawanikwa.
Pasinei nekuganhurwa kwekutsvaga - semuenzaniso, iyo diki sampu yekukura - ruzivo runonakidza rwunopihwa kune ramangwana zvidzidzo. Mimwe mibvunzo saka yakakodzera kuwana nzvimbo mune yakatevera kutsvaga, semuenzaniso, Ndezvipi mamiriro ezvinhu izvo vana vanozviwana ivo vamene mushure mekurwara kana vachigara munzvimbo dzinodzokera kumashure, uko akasarudzika hurongwa hwekutsigira uye matekiniki ekubatsira asiri kuwanikwa?
Iwe unogona zvakare kufarira: Pepper uye Munyu 2.0
Yakakura-yakakura maitiro ehurongwa saka anodikanwa kuti aongorore zvakanyatsojeka maitiro echirwere chevana pane kudzidza uye maitiro ekugadzirisa matambudziko anomuka.
 Stroke Association. (2015). Chinongedzo chakakwana kumatambudziko ekuziva mushure mekurohwa. Kudzoserwa June, 8, 2017.
 Pruski, A. Stroke kudzoreredza nguva. John Hopkins Mushonga.
vana, gumo uropi, kukanganisa kwekuziva, Kurohwa, ischemic sitiroko, kurohwa kwevana
Kuita kwedzidzo mushure mekurwiswa muzera revana2020-08-062020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/ictus-ischemico-pediatrico.jpg200px200px
Kuongorora kunetseka nemhedzisiro yachoKudzidza, Zvinyorwa, Maitiro, Maitiro Ekudzidza